Ethiopia: Mareykanka Oo Xiray Saldhig Drone
Saldhiggan ayaa waxaa laga soo duulin jiray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama drone-ka ee lagula dagaalamo mintidiinta Somalia iyo Yemen.
Dowladda Mareykanka ayaa joojisay inay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama drone-ka ee ay u adeegsato ololaheeda ka dhanka ah mintidiinta Soomaaliya iyo Yemen kasoo duuliso Koonfurta Ethiopia, kadib codsi kaga yimid dowladda Ethiopia, sida ay sheegeen saraakiil.
Xukuumadda Washington ayaa malaayiin dollar ku bixisay sanaddii 2011, inay casriyeyso saldhig diyaarado oo ay ku leedahay magaalada Arba Minch, halkaasi oo ay kasoo dulliso diyaaradaha Reaper-ka loo yaqaan ee qaadi kara madaafiicda culus iyo bambooyinka lagu hayo satalayt-ka.
Saldhiggan ayaa ah saldhigga kaliya ee dowladda Ethiopia ay qirtay inuu ku yaallo dalkeeda.
Talaadadii ayaa saraakiil iyo diblomaasiyiin Mareykan ah ay xaqiijiyeen in lasoo geba gebeeyey dhaqdhaqaaqyadii diyaradaha drone-ka ee saldhigaas.
Afhayeen u hadlay dowladda Ethiopia oo lagu magacaabo Getachew Reda ayaa sheegay in tani ay ku timid codsiga dowladda Ethiopia.
Waxa uu sheegay in markii horeba mashruucan uu ahaa mid waqtiyeysan, islamarkaana labada dowladoodba ay isku diyaariyeen imaanshaha waqtiga dhammaadka.
Dowladda Ethiopia ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka xulufada la ah Mareykanka, waxaana loo arkaa inay muhiim u tahay dagaalka lagula jiro mintidiinta gobolka.
Ciidamada Ethiopia ayaa iyaga oo qeyb ka ah howlgalka Amisom, waxa ay dalka Soomaaliya kula dagaalamayeen kooxda Al-Shabaab, tan iyo sanaddii 2011.
Sarkaal dhinaca arrimaha dadweynaha qaabilsan oo ka tirsan safaaradda Mareykanka ee Addis-Ababa, David Kennedy, ayaa sheegay in shaqaalaha milatariga Mareykanka aysan iminka ku sugneyn saldhigga Arba Minch.
Waxa uu sheegay in labada dalba ay isla garteen in isticmaalka saldhigga Arba Minch aan hadda iyo wixii ka dambeeya loo baahneyn.
Dagaal Dhex Maray Ciidamada Dowladda
Korea-da Woqooyi Oo "Tijaabisay H-Bomb"
Milano: Garoon Loogu Magac Daray Saamiya
Mas'uuliyiin Sare Oo Gaaray Boosaaso